Mashandisiro Aungaita Kuruboshwe Inzvimbo Dzinowanikwa muItari | Save A Train
musha > Travel Europe > Mashandisiro Aungaita Kuruboshwe Inzvimbo Dzinowanikwa muItari
(Last Updated On: 12/06/2020)
Ciao! Uri kuronga rwendo hwose kuna Italy! Ndiyo nzvimbo yechizvarirwo pamusoro Renaissance uye guta kuti zvipikirwa kuti elate uye kukukurudzira nokuda kwayo mabasa ounyanzvi, akitekicha, uye rudo irwo runofambidzana nechikafu. Italy ndiyo musha rechokwadi gastronomy. Plates vasiri chete vakashanda kudya, ivo zvisikwa. Paunenge kusora ichi guta remhepo zvinoshamisa, apo unogona kuwana kuruboshwe mukwende nzvimbo muItaly?
Kufamba kwayo cobbled migwagwa, kusimuka mune yakapararira ambiance yeruchiva, zvinoita mugomo-nyora rwendo. Chinhu bedzi anogona vaparadze dzorudo ari ane dhonza mikwende yako nokuti ndiani anoda kuti kuremedzwa kwese kwaunoenda? Zvemahara zvakasununguka uye zvinofara ndiyo nzira yekufamba-famba mu Italia uye nekuita izvi unogona kushandisa inoverengeka yenzvimbo dzekuruboshwe dzemitoro muItalia.
Train Transport Ko The Eco-Friendly Way To Travel. Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel ne Save A Train, Iwo Akachipa ezvitiketi Matikiti Webhusaiti Munyika.
Left mukwende Locations In Airports
Chisarudzo chakachengeteka uye chiri nyore chekuchengeta machira, pamusoro layover, riri panhandare yendege kana kana uine akasununguka zuva pasina hotera. Yeuka kuti muna zvikuru nomusimboti dzendege ichi chiri nyore nezvechisarudzo, asi dzendege duku kungava trickier saka kutsvakurudza yako usati kuwana yendege wenyu wakasanangurwa. Zvakanaka kutarisa pamberi nguva nekushanyira webhusaiti yendege kuti uwane nzvimbo dzasara dzemthwalo muItari.
Bari kune Fasano matikiti
Taranto kuenda kuFasano matikiti
Milan kuenda kuFlorence matikiti
Venice kune Milan matikiti
Milan Malpensa Airport ndicho kuruboshwe mukwende riri pamusoro kusvika pamwero Terminal 1. Zviri yakazaruka zuva kubva 6 ndiri 10 pm. mari siyana, nokuti vashoma chinhu, ungave kubhadhara pamusoro € 3.50, nekuti chinhu hombe pamusoro € 4 uye mumwe nomumwe nokuda 24 maawa.
Rome Fiumicino Airport ndicho kuruboshwe mukwende iri pasi paburiro Terminal 3. Zviri yakazaruka zuva kubva 6:30 ndiri 11:30 pm uye achaita mari pamusoro € 6 chete chinhu nokuda remaawa 24 nguva.
Venice Marco Polo Airport raMwari mukwende hofisi kuruboshwe riri pasi pauriri, mukati yendege chiteshi pa kuwana 1. Iwo akavhurika zuva nezuva kubva 5 ndine 10 pm, asi nguva dzinosiyana muchando.
Milan kuenda kuNaples matikiti
Florence kuenda kuNaples matikiti
Venice kuenda kuNaples matikiti
Pisa kuenda kuNaples matikiti
Chitima Nzvimbo Kwaunogona Kuchengetera Kuruboshwe Kwezvitoro
Rome ane nhatu huru chitima dzemapurisa, Ostiense, Roma termini, uye Roma Tibhutina. Iwe wakashatiswa chaizvo kuti usarudze kana zvasvika kune vanopa pekuchengetera raramo yakasara muItari.
Kana uri vachipfuura nepakati pechitima kwezuva, then the lockers are the way to go. All of these stations have luggage checking services, vamwe kuzvipira basa.
Unogona kutarisira mari pakati € 10 uye € 15 pazuva, paavhareji. Somunhu diki divi katsamba, chitima dzemapurisa zvakare zvakanakira kuunganidzira pane chikafu nemvura yezuva, kurendesa bikes uye tichiswedera mari.
Zvitima ndiyo nzira iri nyore kwazvo yekutenderera kuEurope nekuMilan, kune mana makuru echitima, Milano Lambrate, Milan Rogoredo, Milano Centrale naMilan Porta Garibaldi.
Sezvatakamboreva kare, hapana kuperevedza basa rubatsiro nokuti kudiwa kukuru kana uri kufamba.
Maximum nguva dzekuchengetera nemaawa enzvimbo dzekurara dzakasarudzika muItaly dzinosiyana pazviteshi zvakasiyana uye iwe unobhadhara paavhareji € 10 kusvika € 15 pazuva. Panogona kunge ndege, mune dzimwe nguva saka ive shuwa yekutarisa.
Venezia Santa Lucia ndiyo nzvimbo yepakati pechitima cheVenice uye ine yakawanda yemasarudzo enzvimbo dzoruboshwe dzemitoro muItari. Kufanana Milan uye Roma, Venice inopa zvine musoro mutengo wakasiiwa wekuchengeta.
Vamwe vachava uremu kusiyana uye zvinoita nguva kusiyana. Self-basa yokuchinjira mbatya kuchikoro zvitoro zviri nyore akaisa zvose pamusoro Venice.
Milan kuenda kuGenoa matikiti
Roma kuenda kuGenoa matikiti
Florence kuenda kuGenoa matiketi
Venice kuenda kuGenoa matikiti
Kuruboshwe Kwekugara Zvivakwa Yakatenderedza Guta Mune Hotera
Your chengarava kudanwa vokutanga vachava hotera yako, hostel, kana Airbnb yenzvimbo yekuruboshwe yemalaptop. Kana zvazvakaipira, usatya kubvunza nekuti establishments zhinji acharamba rworuboshwe mukwende mahara. Its kazhinji chete imwe nguva yakawanda saka kuva nechokwadi kuti avo akakodzera mashoko.
Tinzwe pamberi dhesiki pamusoro nzira nokuda safes uye lockers. Siya chiduku yokutenda kana kupa mikwende yako wemukova.
Milan kuenda kuRoma matikiti
Florence kuenda kuRoma matikiti
Pisa kuenda kuRoma matikiti
Naples kuenda kuRoma matikiti
Kuruboshwe Kwezvikwereti Pakavanzika Services
Stow Bags Your
Uyu akakurumbira European sarudzo uye ane akatisiyira mukurumbira. Tiri pfungwa Italy uye vane mapazi muRoma, Milan, Florence, Naples, Pisa, Catane, uye Bari, nechokwadi kuti kufukidza yose Italy namaguta ayo famed. Self-basa ndiye sarudzo huru.
Usave mitsetse uye kushandisa 24-awa zvokuongorora Chikurukuru, bhegi rako insured kuti kusvikira € 300.
Mukwende Storage Offices
Uyu kuruboshwe mukwende nzira yakananga Venice.
Iwe uchazovawana pane yekusvika horo yeVenice Marco Polo Airport, ari Venice Santa Lucia Railway Station, iyo Piazzale Roma, uye iyo Venice Cruise Terminal. It Nouchenjeri akaiswa munzvimbo zvokufambisa. Izvi zvinoita kuti akakodzera kusarudzwa kusiyira uende.
Milan kuenda kuVenice matiketi
Padua kuenda kuVenice tikiti
Bologna kuenda kuVenice matikiti
Roma kuenda kuVenice matiketi
Kana iwe kuenda Italy uye unofanira rworuboshwe mukwende nzvimbo, saka zvakakosha kutarisa kumberi maererano kwenyu avaiita. Check nguva, tarisa uhuremu, uye tarisa mutengo, gadzirira! Chikurukuru, nakidzwa Italy, mukwende vakasununguka.
Namatira na Save A Train kuti uwane yakanakisa matikiti esarudzo anowanikwa pamitengo yakanakisa!
Unoda embed yedu Blog romukova “Kuruboshwe Kwekunze Zvivakwa MuItaly Uye Kuti Ungavawana Sei” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ane kubatana uku Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/left-luggage-locations-italy/ ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu chitima nzira kumhara mapeji.
Munyaya inotevera batanidzo, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- Link iyi nokuti Chirungu pakutengeserana kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kutsiva iyo nl kune fr kana tr uye nemitauro yakawanda yesarudzo yako.
europetravel eurotrip leftluggage longtrainjourneys masutukesi Train Travel travelitaly
Best Rooftop Restaurants And Cafes In Europe
Rovedza Kufamba France, Chitima Kufamba Hungary, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Spain, Travel Europe
Pandakatenderera The Chirungu Premier League By Train
Chitima Kufamba UK, Travel Europe